Izindaba - Kukhona Igebe Emakethe Ye-Graphite Electrode, Futhi Iphethini Lokunikezwa Okufushane Lizoqhubeka
Imakethe ye-graphite electrode, eyehle ngonyaka odlule, yenze uguquko olukhulu kulo nyaka.
"Engxenyeni yokuqala yonyaka, ama-graphite electrode ethu abeswele." Njengoba igebe lezimakethe kulo nyaka cishe lingamathani ayi-100,000, kulindeleke ukuthi lobu budlelwano obuqinile phakathi kokuphakelwa kanye nokufunwayo buzoqhubeka.
Kuyaqondakala ukuthi kusukela ngoJanuwari kulo nyaka, intengo ye-graphite electrode ibilokhu ikhuphuka ngokuqhubekayo, isuka ku-18,000 yuan / ton ekuqaleni konyaka kuya kuma-yuan / ton angama-64,000 okwamanje, ngokunyuka okungama-256%. Ngasikhathi sinye, i-coke yenaliti, njengempahla ebaluleke kakhulu ye-graphite electrode, isiyasweleka, futhi intengo yayo ibilokhu inyuka yonke indlela, enyuke ngaphezu kuka-300% uma iqhathaniswa nokuqala konyaka.
Isidingo samabhizinisi wensimbi esezansi sinamandla
I-graphite electrode yenziwa kakhulu nge-petroleum coke kanye ne-coke yenaliti njengezinto zokusetshenziswa netiyela lamalahle njenge-binder, futhi isetshenziswa kakhulu esithandweni se-arc esenziwe ngensimbi, esithandweni samanzi se-arc, esithandweni somlilo, njll. I-80% yokusetshenziswa okuphelele kwe-graphite electrode.
Ngo-2016, ngenxa yokwehla kwamandla okwenza izinsimbi ze-EAF, ukusebenza kahle kwamabhizinisi amabhabhoni kwehla. Ngokwezibalo, inani lokuthengisa eliphelele lama-graphite electrode eChina lehle ngo-4.59% unyaka nonyaka ngo-2016, kanti ukulahleka okuphelele kwamabhizinisi ayishumi aphezulu ama-graphite electrode kwakungu-222 million yuan. Wonke amabhizinisi wekhabhoni alwa nempi yamanani ukugcina isheya lawo lemakethe, futhi intengo yokuthengisa ye-graphite electrode iphansi kakhulu kunezindleko.
Lesi simo siguqulwe kulo nyaka. Ngokwanda kokulungiswa kohlangothini lokuphakelwa, imboni yensimbi nensimbi iyaqhubeka nokukhuphuka, futhi "imicu yensimbi" kanye namakhemikhali aphakathi nendawo ahlanzwe kahle futhi alungiswa ezindaweni ezahlukahlukene, isidingo samathambo kagesi emabhizinisini ensimbi sikhuphukile ngokucijile, ngaleyo ndlela kuqhuba ukufunwa kwama-graphite electrode, ngesilinganiso seminyaka esilinganiselwa kumathani ayi-600,000.
Njengamanje, kunamabhizinisi angaphezu kwama-40 anomthamo wokukhiqiza we-graphite electrode odlula amathani ayi-10 000 eChina, ngomthamo ophelele wokukhiqiza ongaba ngamathani ayizigidi eziyi-1.1. Kodwa-ke, ngenxa yethonya labahloli bokuvikelwa kwemvelo kulo nyaka, amabhizinisi wokukhiqiza we-graphite e-Hebei, eShandong nasezifundazweni zaseHenan asesimweni sokukhiqizwa okukhawulelwe nokumiswa kokukhiqizwa, futhi ukukhiqizwa kwe-graphite electrode yonyaka kulinganiselwa ukuthi kungamathani angaba ngu-500,000.
"Igebe lemakethe elingamathani ayi-100 000 alingaxazululwa ngamabhizinisi akhulisa umthamo wokukhiqiza." UNing Qingcai uthe umjikelezo wokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-graphite electrode imvamisa iba ngaphezu kwezinyanga ezimbili noma ezintathu, futhi ngomjikelezo wesitoko, kunzima ukukhulisa ivolumu esikhathini esifushane.
Amabhizinisi eCarbon anciphise ukukhiqizwa futhi avale, kepha ukufunwa kwamabhizinisi wensimbi kuyanda, okuholela ekutheni i-graphite electrode ibe yimpahla eqinile emakethe, futhi intengo yayo ibilokhu inyuka yonke indlela. Njengamanje, intengo yezimakethe inyuke ngamahlandla ama-2,5 uma kuqhathaniswa noJanuwari kulo nyaka. Amanye amabhizinisi ensimbi kufanele akhokhe kusengaphambili ukuze athole izimpahla.
Ngokusho kwabangaphakathi embonini, uma kuqhathaniswa nesithando somlilo, insimbi yesithando sikagesi isonga kakhulu amandla, ibamba imvelo futhi iphansi kwekhabhoni. Njengoba iChina ingena kumjikelezo wokwehla kwesigaxa, insimbi yomlilo kagesi izofinyelela intuthuko enkulu. Kulinganiselwa ukuthi inani lalo kulo lonke inani lokukhishwa kwensimbi kulindeleke ukuthi lenyuke lisuka ku-6% ngo-2016 liye ku-30% ngo-2030, kanti nesidingo sama-graphite electrode sisesikhulu esikhathini esizayo.
Ukukhuphuka kwentengo kwezinto ezisetshenziswayo ezingasetshenziswanga akwehli
Ukukhuphuka kwentengo ye-graphite electrode kudluliselwe masinyane enyukeni lochungechunge lwezimboni. Kusukela ekuqaleni konyaka, amanani entengo ezinto zokusetshenziswa ezinkulu zokukhiqiza ikhabhoni, njenge-petroleum coke, i-tar tar pitch, i-calcined coke ne-coke yenaliti, akhuphuke ngokuqhubekayo, ngokunyuka okuphakathi kuka-100%.
Inhloko yomnyango wethu wokuthenga ichaze "njengokunyuka". Ngokusho komuntu ophethe, ngesisekelo sokuqinisa isinqumo sangaphambi kwemakethe, inkampani ithathe izinyathelo ezinjengokuthenga ngentengo ephansi nokukhuphuka kwempahla ukubhekana nokwenyuka kwentengo nokuqinisekisa ukukhiqizwa, kepha ukukhuphuka okukhulu kwezinto zokusetshenziswa kude kakhulu nokulindelwe.
Phakathi kwezinto ezisetshenziswayo ezikhulayo, i-needle coke, njengempahla eyinhloko eluhlaza ye-graphite electrode, inokwenyuka kwamanani amakhulu, ngentengo ephakeme kakhulu ekhuphuka ngama-67% ngosuku olulodwa nangaphezulu kwama-300% ngesigamu sonyaka. Kuyaziwa ukuthi i-needle coke ibanga ngaphezu kuka-70% wezindleko eziphelele ze-graphite electrode, futhi impahla eluhlaza ye-ultra-high power graphite electrode yakhiwe ngokuphelele nge-coke yenaliti, esebenzisa amalitha ayi-1.05 ithani ngalinye le-ultra-high power graphite i-electrode.
I-coke yenaliti nayo ingasetshenziswa kumabhethri e-lithium, amandla enuzi, i-aerospace neminye imikhakha. Kungumkhiqizo oyindlala ekhaya naphesheya, futhi iningi lawo lincike ekungenisweni kwezimpahla eChina, futhi intengo yalo ihlala iphakeme. Ukuze kuqinisekiswe ukukhiqizwa, amabhizinisi e-graphite electrode aqhuma ngokulandelana, okwaholela ekukhuleni okuqhubekayo kwentengo ye-coke yenaliti.
Kuyaqondakala ukuthi mancane amabhizinisi akhiqiza i-coke yenaliti eChina, futhi abantu abakule mboni bakholelwa ukuthi ukwanda kwamanani kubonakala kuyizwi elijwayelekile. Yize inzuzo yabanye abakhiqizi bezinto eziluhlaza ithuthuke kakhulu, ubungozi bezimakethe nezindleko zokusebenza kwamabhizinisi angaphansi kwe-carbon ziyakhula ngokuqhubekayo.